vendredi, 01 novembre 2019 17:42
Fiainana antoko: Hanao « Fihaonana nasionaly » ny HVM amin’ny 9 novambra 2019
Hanatanteraka « Fihaonana nasionaly » etsy amin’ny foibeny etsy Andraharo-Antananarivo ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) ny tontolo andron’ny 9 novambra 2019. Tanjona ny hanatsarana sy fandrindrana ankapobeny ny fiainana anatin’ny antoko, araka ny fanazavan’i Rachidy Mohamed, Sekretera jeneraly nasionalin’ny HVM.
Mamaramparana ny « pré-campagne » ny kandida Ben’ny tanàna Rina Randriamasinoro. Nitety ireo Boriborintany enina teto an-drenivohitra, tao anatin’izay efatra herinandro izay. « Henoko daholo ny hetahetanareo, ny ahiahinareo, ireo fanavaozana tinareo hataoko rehefa lany Ben’ny tanan’Antananarivo ny tenako », hoy ity kandida narotsaky ny antoko Tiako i Madagasikara eto Antananarivo Renivohitra ity.
« Tsarovy fa olon-tsotra toa anareo ny tenako, ary tsapako ny mahazo, ny manjo ary ny iainanareo. Ataoko toy ny ankohonako, ka ataoko vain-dohandraharaha ny fijerena akaiky ny asa takianareo amiko, tsy ho nenina na ho latsa no hoavinareo miaraka amiko, fa dia ataontsika miaraka, mandroso tokoa ny tanàna. Maro ny programa sy asa apetrako ho fanamby fa mahavita zavatra ny tanora », hoy i Rina Randriamasinoro.
Fiombonam-bavaka amin’ny rehetra, izay hatao ao amin’ ny Kianja mitafo Mahamasina, no hanombohany ny fampielezan-kevitra ny marainan’ny talata 05 novambra 2019.
vendredi, 01 novembre 2019 17:17
Mahanoro: Nindaosin'ny fahatesana ny kandida Ben'ny tanàna Lengo
Nodimandry noho ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy i Lengotiana Petera Jackson. Avy ao Antananarivo ho aty Mahanoro hamonjy fanokafana ny fampielezan-kevitra izy no tra-doza tamin’ny lalam-pirenena faha-11A, efa hiditra an’i Vatomandry.
Nidona tamin'ny fiara Sprinter ny moto nentiny, tamin'ny lanana anelanelan'i Vatomandry sy Antsapanana, ny alakamisy 31 oktobra tokony ho tamin'ny 8ora alina.
Mafy ny fifandonana. Maty tsy tra-drano i Lengo. Naratra, tsaboina any amin'ny hopitaly ny zanany, nanao taingin-droa niraka taminy.
Kandida tsy miankina amin'ny fifidianana Ben'ny tanàna hatao amin'ny 27 novambra 2019, eto amin'ny Kaominina ambonivohitr'i Mahanoro, Faritra Atsinanana i Lengo.
Miisa dimy aminy ireo Kandida Ben'ny tanàna nindaosin'ny fahatesana.
vendredi, 01 novembre 2019 17:12
Fonjan’Antanimora: Nijery imaso ny zava-misy, nampahafantatra ny fanapahan-kevitra horaisina i Andry Rajoelina
Tonga teny amin’ny fonjan’Antanimora Antananarivo ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny minisitry ny Fitsarana Randrianasolo Jacques, niaraka tamin’ireo mpiasa-miasa aminy avy, ny alakamisy 31 oktobra 2019 maraina.
Miisa 4 357 ireo voafonja ao tamin’ny fotoana nahatongavany teny, raha toa ka 800 no zakan’ity fonja ity.
Nitety ireo kartie itazomana ireo voafonja lahy sy vavy ary ireo tsy ampy taona, i Andry Rajoelina nahita maso ny foto-drafitrasa, ny fiainan’ireo voafonja, nihaino ny antony nahatonga azy ireo ao am-ponja sy ny sazy efain’ireo efa voatsara sy ny fitarainan’ireo maro tsy mbola voatsara.
vendredi, 01 novembre 2019 10:35
01 Novambra: Fankalazana manetriketrika ny Olomasina rehetra
Manandanja ho an’ny finoana Katolika ny 01 Novambra, ankalazana manetriketrika ny Olomasina rehetra.